Squarespace: Ini Ndakavaka A Spa Webhusaiti ine yepamhepo Chitoro uye Kugadzwa Kugadzika Mune Rimwe Zuva | Martech Zone
Squarespace: Ini Ndakavaka A Spa Webhusaiti ine yepamhepo Chitoro uye Kugadzwa Kugadzika mune Rimwe Zuva
Wednesday, April 15, 2020 Chipiri, Zvita 15, 2020 Douglas Karr
Kana izvo zvichinzwika sezvisingadaviriki, hazvisi. Musikana wangu ari esthetician uye masaja Therapist muFishers, Indiana. Ini ndanga ndichizomuvakira saiti mwedzi mishoma yapfuura, asi zvakatadza nekuda kwebasa revatengi iro rakakoshesa. Kurumidza kuenda kumberi kwekuvharwa uye rakawanda rebasa riya rakafamba munzira asi vatengi vangu vakambomisa zvirongwa kana kuchinja zvakatarwa kugadzirisa kurasikirwa kwemari.
Dai ndaizovaka saiti muWordPress, ini ndingadai ndakapedza vhiki kana maviri ndichibatanidza akasiyana mapulagini, ekubhadhara masuo, uye kutsvaga imwe mhando yekuronga mhinduro. Nekuti Steph haafarire zvetekinoroji, zvingadai zvakamuomera kuti agadzirise futi. Nekudaro, ndakafunga kutora squarespace yespin.
Ndakatanga kuvaka saiti ingangoita 8:00 mangwanani… uye ndainakidzwa zvekuti ndakashanda kusvika na4: 00 mangwanani anotevera payakapera. Zvandakakwanisa kuita zvaive zvakanakisa - inzwa wakasununguka kudzvanya nekuongorora saiti.
Sezvo Spa yaSteph parizvino yakavharwa kuburikidza nedenda, iye aida kukwidziridza saiti iyi uye nekuwedzera kugona kwevanhu kuti vatenge makadhi echipo… kunyangwe vachikanda mutepfenyuro kana kadhi rechipo raive revapindura vekutanga kana vashandi vehutano. Ini ndakakwanisa kuzviita zvese.
Squarespace's-in-one chikuva inokupa zvese zvaunoda kuti umhanye bhizinesi rako. Kunyangwe iwe uchangotanga kana uri yakasimbiswa mhando, yavo chikuva inobatsira rako bhizinesi webhusaiti kukura. Squarespace ine dzinoverengeka dzekuvandudza uye sarudzo dziripo parizvino yakaderedzwa kana yemahara panguva yedambudziko re COVID-19 naizvo.
Mumaawa asingasviki makumi maviri nemana, ini ndakavaka zvese pasina tambo imwe yekodhi:
Iyo yakazara inoteerera, yakanaka webhusaiti
Iyo yekugadzirisa-in-nzvimbo webhusaiti mupepeti
Chiziviso chebhari kumusoro kwesaiti
Ecommerce yekutengesa zvigadzirwa
Kadhi kadhi kutengesa
Kugadzwa kuronga neemail uye meseji zviyeuchidzo
Karenda yekubatanidza pakati pekugadzwa kwekugadzwa neGoogle
Email tsamba tsamba yekupinda-mukati uye yekugadzira
Kugadzira kodhi yekodhi
Kubhadhara gedhi kusanganiswa pamwe nePaul yekutengesa kwePOS mune yake spa
Kubhadhara gedhi kusanganiswa pamhepo nePayPal yekutengesa pamhepo
Iyo blog yeSteph yekugovana nhau uye kugadzirisa pane
Squarespace's mushandisi interface ine yekudzidzira curve, asi yavo yepamhepo rubatsiro uye vadzidzisi vanopa ruzivo rwese rwaunoda. Kuita kuti zvese zvishande zvaive zvisina musono zvachose, asi zvaive padyo. Semuenzaniso, iyo Kugadzwa Kurongwa uye Ecommerce zvikamu zviviri zvakasiyana zvesaiti izvo chimwe nechimwe chinoda yavo yekubhadharira gedhi kubatanidzwa.
Uye, squarespace ine zvimwe zvakanaka mapakeji zvimiro ... zvinenge zvese zvandaida kuti zvese zvishande zvaive kusimudzira kune nyowani package. Ini handisi kunyunyuta, asi gadzirira kurova bhatani rekusimudzira kashoma apo iwe paunowana maficha aunoda kuti uwane zvese zvaunoda. Kuvaka saiti yese muzuva kana maviri kune asingasviki madhora chiuru pagore nezvose izvi zvinhu zvinoshamisa!
The Squarespace Kuronga kukwidziridzwa kune zvese zvaunoda kuti ushandise bhizinesi rako pachako rinoda kugadzwa. Yakazara-kuzvishandira kune ako makasitoma ane tani yezvinhu:
Karenda Kubatanidza - Gadzirisa otomatiki makarenda aunoshandisa kare, seGoogle, Outlook, iCloud, kana Hofisi 365.
Yakagadziriswa Mari - Batanidza pamwe neyekubhadhara processor kuti ubhadhare nyore nyore vatengi vasati kana mushure mekugadzwa.
Vhidhiyo Conferencing - Zvisinei nekuti vatengi vako varipi, taura takatarisana neGoToMeeting, Zoom, uye JoinMe kusangana.
Yakagadziriswa Kutaurirana - Tumira zvimisikidzo zvakagadzirwa uye zvakagadziriswa, zviyeuchidzo, uye nekutevera-otomatiki. Dhizaina zvese kuti zvifanane nechitarisiko chiripo uye kunzwa kwebhizinesi rako.
Kunyorera, Kadhi Kadhi, uye Mapakeji - Tengesa vatengi vako nekuwedzera dzimwe nzira dzekuverenga. (Inowanikwa pazvirongwa zvekusarudza.)
Tsika Dzakawanda Dzemafomu - Dzidza nezvevatengi vatsva kana kujairira nevatengi vanodzoka nemafomu ekudyira tsika.
Kuvaka chitoro chepamhepo ku kutengesa zvigadzirwa zvemadhijitari kana zvomuviri zviri nyore neS squarespace. Ivo vakatodaro mawedzero-ekuendesa kuresitorendi iyo inogona kuuya inobatsira panguva ino yekuvhara. Ecommerce maficha anosanganisira:
chitoro - Merchandise, ronga, uye gadzira risingagumi nhamba yezvigadzirwa nematagi, zvikamu, uye yedu yekukweva-uye-kudonhedza yekushandisa chishandiso.
Kubatanidzwa kwemukati - Chigadzirwa chega chega chaunotengesa chinoiswa mukatalog saka zviri nyore kushandisa zvekare mumablog mablog uye eemail mishandirapamwe.
Kuronga - Enda kumberi kwekutengesa, kukwidziridzwa, uye matsva zvigadzirwa zvigadzirwa nekuronga zvigadzirwa kuti zvioneke pane yakatarwa zuva.
Inventory - Chengetedza zvinyorwa zvako neiri nyore kushandisa interface uye nekukurumidza kuona mune ako akasiyana uye masheya ematanho. Iwe unogona kunyange kuseta zviyeuchidzo kumusoro.
Makadhi emakadhi - Makadhi echipo inzira iri nyore yekuti vatengi vagovane zvigadzirwa zvako nemhuri yavo neshamwari.
Subscriptions - Gadzira inodzokororwa mari uye kuvaka vatengi kuvimbika nekutengesa kunyoreswa kune zvigadzirwa zvako pasvondo kana pamwedzi.
Gateway Kubatanidzwa - Tora kubhadhara kuburikidza neindasitiri inotungamira kusangana neStripe uye PayPal.
Checkout Customization - wedzera ongororo yevatengi kana sarudzo yekugovana chipo chemashoko.
Shipping - Tora chaiyo-nguva yekufungidzira yekutakura yevatengi veUS panguva ye Checkout ine simba rekutumira maturu uye kusanganisa
Reviews - Sarudzo dzinotangira pamabhureki akareruka eHTML ekuongorora kusvika kunyudza mukati mevatengi wongororo kubva kuFacebook.
Kubatanidzwa Kwemagariro - Nyore govana zvigadzirwa zvako kuFacebook, Twitter, uye Pinterest, uye tag zvigadzirwa mune ako Instagram zvinyorwa.
Squarespace Email Kushambadzira
Integrated email kushambadzira pa squarespace yakanaka kwazvo… hapana kubatana kwakapusa zvachose. Zvimiro zvinosanganisira:
kushandisa michina - Vanogamuchira vanyoreri kune yako tsamba yekutumira, uvatumire iyo nyowani-nhengo dhisikaundi, uye zvimwe nema automated maemail. Gara pamusoro-pe-pfungwa uye kuvaka hukama nevateereri vako pasina kumbobvira wadzvanya kutumira.
Nzwisisa Kubata Rondedzero Management - Tumira email zvinyorwa, zvine hungwaru zvivake kubva kune email ndima pane yako saiti, kana gadzira hodha nyowani nyowani yemushandirapamwe.
Personalization - Sanganisira zita remunyoreri wako mumutsara wenyaya kana muviri wemushandirapamwe wako kuti uwedzere kubata kwako kune wega mushandirapamwe waunotumira.
Squarespace Nhare Yekugadzirisa Mapurogiramu
Squarespace zvakare ine yakakura nhare yekugadzirisa kunyorera kwe apuro uye Android, zvichigonesa varidzi vebhizinesi kugadzirisa yavo saiti kubva kufoni yavo.
Yese webhu chikuva ine kusimba uye kushaya simba. Ehezve, yetsika-yekuvandudza chikuva inogona kupa isingaperi isingachinjiki ichienzaniswa neplatifomu senge squarespace. Nekudaro, iwo mabhenefiti eiyo yakasimba yese-mu-imwe chikuva senge ichi chinodarika izvo zvisingakwanisike nemakiromita. Uye mutengo unopfuura zvinonzwisisika.
Nyaya chete yandakamhanyira pakuvaka saiti yaive yekuti musikana wangu dzimwe nguva vanhu vanosvika uye vanoshuvira kubhadhara mukati-munhu kwete online. Nehurombo, squarespace POS yakanakira chero chinhu checommerce shopu, asi mhando dzekugadzwa hadzinyatsooneka paapp kuzovabhadharisa ivo pachavo.
Zvakare, nepo Square yakabatanidzwa semubhadharo processor, hapana nzira yekuyananisa mhando dzekugadzwa mukati mePara. Muchokwadi, hapana kana nzira yekuburitsa ruzivo zviri nyore kupinza muPara. Nekuda kweizvozvo, ini ndaifanirwa kuisa-ese ese marudzi ekugadzwa uye ekuwedzera-maakaundi mune yangu musikana Square account. Ndinovimba icho chinodiwa chimiro chakabatanidzwa munguva pfupi!
Side katsamba… Ini handisi mubatanidzwa weSquarespace… ingori fan. Ivo havapi vanobatana kune Indiana vagari. Ini ndangofadzwa chaizvo nepuratifomu uye nekukurumidza sei ini ndakakwanisa kuita kuti saiti yaSteph iitwe!
Tags: zvose-mu-mumwekalendari yekugadzwakuronga musanganoecommerceedit-in-nzvimbochipo makadhiproduct product reviewsmusangano wevhidhiyowebhusaiti chikuva
Maitiro Ekugadzira Instagram Vhidhiyo Ads Anokutorera Iwe Mhedzisiro